Arsenal Oo Kula Xifaaltameysa Juventus Saxiixa Weeraryahanka Atletico Madrid Alvaro Morata
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo kula xifaaltameysa Juventus saxiixa weeraryahanka Atletico Madrid Alvaro Morata
February 21, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in ay isku dayi doonto in ay Juventus ka hor istaagto in ay Alvaro Morata heshiis joogto ah kala saxiixdaan Atletico Madrid .
Ciyaaryahankii hore ee Chelsea ayaa la saadaaliyay inuu soo afjari doono bianconeri ka dib imaatinka Dusan Vlahovic bishii Janaayo, laakiin wuxuu qarka u saaran yahay inuu sii joogo Turin ilaa ugu yaraan dhamaadka xilli ciyaareedka.
Mustaqbalka Morata ee Atletico ma cadda heshiiskiisa Spain oo dhacaya 2023, laakiin Juventus ayaa keeni karta ikhtiyaar ay ku iibsato xiddiga reer Spain markii labaad xagaagan kooxda heysata horyaalka La Liga.
Si kastaba ha ahaatee, Tuttomercatoweb ayaa sheegtay in Morata bedelkeeda uu isha ku hayo u dhaqaaqista Arsenal, kuwaasi oo suuqa u gali doona weeraryahan cusub ka hor xilli ciyaareedka 2022-23.
Gunners waxa ay qarka u saaran tahay inay beeca xorta ah ku waayi doonto Alexandre Lacazette iyo Eddie Nketiah lix bilood gudahood, taasoo ka dhigeysa Folarin Balogun iyo Mika Biereth oo da’doodu ka hooseyso 23 jirada inuu yahay labada dookh ee kaliya ee Mikel Arteta ee weerarka dhexe.
Juventus iyo Atletico ayaa lagu soo waramayaa inay ku heshiiyeen €35m (£29m) oo ay ku iibsan karaan ka dib markii uu yimid 2020, laakiin hadda waxaa la sheegay in Juve ay isku dayi doonto inay ka wada xaajoodaan heshiis 15 milyan euro (£ 12.5m) oo gunno ah.